Mootummaan Nama Nyataan TPLF dargagoo Oromoo burjajesuu yaala jira.
Tplf yeroo ammaa kana tokkumma'uu abo fi saba oromoo biyya keessaa fi alaa sodaachuun: tarsiimoo fi imaammata haarawaa baafatee jira. Keessuma mooraa universiity fi mana barumsaa sadarkaa 2ffaa, qopha'inaa fi sadarkaa lammaaffaa keessatti ijaarsa haarawaa jalqabee jira. Imaammati haarawaan kunis shanii wal ijaaranii qayyabachuu fi wal-to'achuu kan jedhu ifatti qabatee deemaa jira. Garuu dhoksaan ijaarsa kana ijaarsa siyaasa kan qabu ta'ee wal gargaaraa jecha jedhuun haguugamee jira . Ijaarsi kunis ummata oromoof yaadee osoo hin taanee ijaarsa umurii isaa ittiin dheereffachuuti.
Wal gargaaruun ummata oromoof haaraa mit aadaa dha malee. Habashooti iyyuu wal gargaarsaa fi kabaja ummati oromoo waliif qabu waan beekaniif magaalaa fi baadiyyaa oromiyaa keessa deemanii kadhatu kanaaf ijaarsi tplf qabatee deemu kun dhoksaan isaa oromoon walii isaa akka nyaatu gochuuf malee akka wal nyaachisuuf yaadamee miti. Kaayyoon ijaarsa kanaas akka oromoonni garaa tokko ta'ee garbummaa fi hacuuccaa waggaa 121 of irraa hin buusnee dha malee oromoof yaadee miti. Osoo wal barsiisuu wal gargaaruu saba oromoo ni fedha ta'ee maaliif barattoota, beektota, jaarsolii fi dargaggoota oromoo rasaasaan waadaa ture,manahidhaa akka qaallittii, sanqallee,zuwaayii fi k.kfaatti guuree rashanaa ture.
Kanaaf nuti barattoonni oromoo unversiity fi mana barumsaa sadarkaa 1 ffaa fi lammaffaa siyaasa tplf kana beeknee of eeggachaa, ijaarsa biyya alaatii oromiyaa bilisummaa gonfachiisuu karoorfame kana hubaanee nutis warri biyya keessa jirru akkasumas sadarkaa unversiity, kolleejjii fi mana barumsa sad 1ffaa fi lammaffaa ijaarsa tplf umurii isaa dheereffachhuf ka'e kanatti fayyadamnee nuti immoo umurii isaa haa gabaabsinu.kanaaf yaa saba oromoo nuti hanga yoomiitti goyyoomfamn, garboomna kottaa akkuma abon tokko ta'ee qabsa'aa jiru nutis tokko taanee yaada tokkoo fi onnee tokkoon garbummaa waggaa 121 of irraa qolannaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Baratoota University Oromiyaa Irraa